कार्कीलाई कृषिबाट फलिफाप, एक हजारको लगानीबाट एक करोडको सम्पत्ति – Arthatantra.com
म्याग्दी । आजभन्दा ४० वर्ष पहिले ‘विदेश पनि जान्न, जागिर पनि खान्न’ भन्ने अडानका साथ एक हजारको लगानीबाट कृषि पेशा शुरु गरेका म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ खबराका चन्द्रबहादुर कार्की अहिले एक करोड रुपियाँ भन्दा बढी सम्पत्तिको मालिक बन्न सफल भएका छन् ।
१०८ चौतारी बनाई वरपीपल रोप्ने चन्द्रबहादुर कार्कीको सपना साकार !
त्यस्तै, गाउँमा र बेनीको मंगलाघाटमा गरी दुईवटा पसलसमेत सञ्चालन गरेका छन् । बेनीको मंगलाघाटमा रहेको उनको पसलमा अग्र्यानिक कृषिउपज, फलफूल र तरकारीका बिरुवा (बेर्ना), वर, पीपल, समी, तुलसीलगायत धार्मिक वृक्षका बिरुवासमेत पाइन्छन् ।
कृषि पेशाबाट भएको आम्दानीले कार्कीले गाउँमा जग्गासमेत जोडेका छन् । “रु एक हजारबाट शुरु गरेको कृषि पेशाले अहिले करोडौँको सम्पत्तिको मालिक बनायो”, कार्कीले भने ।
कार्कीको प्रगति देखेर त्यहाँ पुग्ने धेरै मानिसले आश्चर्य प्रकट गर्दछन् । गर्न सक्ने हो भने आफ्नै माटोमा पैसा फलाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण बनेका कार्कीलाई उनका छोरा र श्रीमती लक्ष्मी कार्कीले सघाउँदै आउएका छन् । रासस
१३ पुस २०७४ मा प्रकाशित
जनता बैंकको एक अर्ब रुपैयाँको बोनस शेयर आउँदै काठमाडौं । धेरैवटा बैंकसंग मर्जरका साथै पछिल्लो समय वित्तिय क्षेत्रमा राम्रो प्रगति […]
विकास बैंकको साढे तीन लाख कित्ता सेयर खुल्यो ! काठमाण्डौं । सहारा विकास बैंकले डेढ सय प्रतिशत अर्थात एक सय कित्ता बराबर १५० कित्ता […]